အဖြူရောင်သံယောဇဉ်: မြန်မာပြည် နဲ့ ဖုန်း အခမဲ့ ပြော လို့ ရပါပြီ
မြန်မာပြည် နဲ့ ဖုန်း အခမဲ့ ပြော လို့ ရပါပြီ
ရန်ကုန် နဲ့ အခ မဲ့ ဖုန်း ပြော နိုင် တာ ကို သိနေ တာ ကြာ ပါ ပြီ။ သုံး နေ တာ လည်း ကြာ ပါ ပြီ။ ကိုယ် အခ မဲ့ သုံး နေ ပြော နေ သလို ရန်ကုန် နဲ့ နိုင်ငံ ရပ်ခြားရောက် မြန်မာ တော် တော် များများ သိ နေကြမယ် ထင် ပြီး ကိုယ် သိထား တာ ကို ပို့စ် မှာ ရှယ် မလုပ် မိ တာပါ။
တနေ့ က ကျွန်တော် internet သုံး နေ တုံး ရန်ကုန် က ငယ် သူငယ် ချင်း တ ယောက် က gtalk မှာ လာ စကား ပြော ပါ တယ်။ သူ က Canada မှာ နေ တဲ့ သား ကို Gtalk ပြော တုံး ကျွန်တော် ကို online တွေ့ လို့ စကားပြော ဖြစ် ပါတယ်။ သူ ကို အခ မဲ့ ဖုန်း ခေါ် လို့ ရ တဲ့ အကြောင်း သိ သလား မေး တော့ သူ မသိ ပါ။ သူ လို ပဲ ရန်ကုန် က မသိ သေး သူ များ ရှိ နိုင် တာ မို့ ကျွန်တော် သိ တာ လေး ကို အများ သိ အောင် ပို့စ် တင် လိုက် ပါ တယ်။
အမှန်တော့ ကျွန်တော် Gtalk ကို မသုံး ဖြစ် တာ ကြာ ပါ ပြီ။ ကျွန်တော် ရန်ကုန် ကို အခမဲ့ ဖုန်း ခေါ် နိုင် တဲ့ နည်း လမ်း ကို သိ ကထည်းက မသုံး ဖြစ် တာ ပါ။
မသိ သေး တဲ့ သူတွေ ဖုန်း ဘိုး သက် သာ အောင် ရယ် ၊ ခေါ် ရ တာ အ ရမ်း ကို အဆင်ပြော ချောမွေ့ တာ မို့ ကျွန်တော် သိ တာ ကို ဒီ ပို့စ် က နေ ရှယ် လိုက် ပါတယ်။ သုံး ကြည့် ပါ။ အ ရမ်းကို သဘော ကျ သွားမှာ ပါ။
Viber Apps photo internet
ကျွန်တော် သိ တဲ့ အခ မဲ့ ဖုန်း ခေါ် တဲ့ နည်းက viber သို့ မဟုတ် whatsapp ဆို တဲ့ Applications တွေ ကို မိမိ ရဲ့ Smart ဖုန်း ထဲ ကို ဒေါင်း လုပ် လုပ် ပြီး အခမဲ့ ပြော လို့ ရ ပါ ပြီ။
အခမဲ့ ဖုန်းပြော နိုင် ဘို့ အတွက်
၁. ဖုန်းပြော မဲ့ လူ ၂ ဘက် လုံး မှာ Viber သို့ Whatsapp Applications တွေ သွင်း ထား တဲ့ internet သုံး smart ဖုန်း များ ရှိ ရ ပါမယ်။
(နိုင်ငံ ခြားမှ Smart ဖုန်း သုံး သူ တွေ အတွက် က တော့ ဘာ အခက် အ ခဲ မှာ မရှိ ပဲ online က နေ
Viber သို့ Whatsapp Applications တွေ ကို ဒေါင်း လုပ် နိုင် ပေ မဲ့ ရန်ကုန် က လူ များ အတွက် တော့ internet connection အခက် အ ခဲ ကြောင့် ရယ်၊ ကျွမ်းကျင် မှု မရှိ တာ တွေ ကြောင့် နဲ့ မို့ ၊ လို အပ် တဲ့ Applications တွေ ကို မိမိ ဘာ သာ ဒေါင်း လုပ် လုပ် ရင် အခက် အ ခဲ နည်းနည်း တွေ့ နိင် တာ မို့ အကောင်းဆုံး က တော့ မိုဘိုင်း ဖုန်း ဆိုင် တွေ ကို သွား ပြီး လို အပ်တဲ့ apps တွေ ကို ၀ယ် ယူ ရင် ပို အဆင် ပြေ ပါ လိမ့် မယ်။ ကျွန်တော် သိ တာ က တော့ apps တခု ကို 2000 ကျပ် ပေး ရ တယ် ပြော ပါတယ်။ ဈေး နုံးက တော့ တဆိုင် နဲ့ တဆိုင် မ တူ ပါ။ ရန်ကုန် က မိုဘုိင်း ဖုန်း ဆိုင် တိုင်း လို software နဲ့ apps များ ဒေါင်း လုပ် ပေး နိုင် ပါ တယ်။)
Whatsapp photo Internet
၂. ရန်ကုန် မှာ internet သုံး ဖုန်း တွေ (IPhone, Android , Black Berry ဖုန်းများ ) အလွယ် တကူ ၀ယ် လို့ ရ နေ ပါ ပြီ။ ဈေး နုံး က တော့ ၂ သိန်း က နေ ၅ သိန်း ကျော် ထိ ရှိပါတယ်။ တရုပ် လုပ် ဖုန်း များ ပေ မဲ့ ဈေး နုံး အ နည်း အများ အ လိုက် သုံး ရ တာ အဆင် ပြေ မှု လွယ် ကူ မှု တွေ ကွာ ခြား ပါတယ်တဲ့၊၊ ဆို လို တာ က ဈေး နည်း နည်း ပို ရင် သုံး ရ တာ ပိုပြီး connection ကောင်း ပြီး အဆင် ပြေ တယ် ပြော ပါ တယ်။
၃. ရန်ကုန် က internet ဖုန်း တွေ က prepaid card ၀ယ် ပြီး သုံး တဲ့ စနစ် ပါ။ internet card ၀ယ် ပြီး မိမိ ဖုန်း ထဲ သွင်း ပြီး ပြော ရင် ၊ တ မိနစ် ကို မြန်မာ ကျပ် ငွေ ၄ ကျပ် ပေး ရ ပါတယ်။
တနာ ရီ ကို ၂၄၀ ကျပ် သာ ကုန် ကျ ပြီး ကြိုက် သလောက် ပြော ၊ ကြိုက် တဲ့ နေ ရာ က တကမ္ဘာ လုံး ကို ၁၀၀% အခ မဲ့ ခေါ် နိုင် ပါ တယ်။ Viber သို့ Whatsapp Applications တွေ သုံး ပြီး ခေါ် တာ မို့ လို့ ၁၀၀ % အခ မဲ့ ပါ။
မိမိ ဖုန်း က internet သုံး ခ တ နာရီ ကို ကျပ် ၂၄၀ သာ ပေး ရ ပြီး ဖုန်း ခေါ်ဆို ခ လုံး ၀ မပေး ရ ပါ။
ရန်ကုန် က ကျွန်တော် ဆွေမျိုး များနဲ့ လက် တွေ့ သုံး နေ တာ ပါ။ အခု ဆို ရင် ဖုန်း ကို အချိန် ရွှေး အ ခ မဲ့ ခေါ် နိုင် တာ မုိ့ ရန် ကုန် က ကျွန်တော် မိသားစု များ က အမေရိကား က အချိန် ကို သေချာ မ စမ်း စစ် ပဲ ခေါ် ချင် တဲ့ အချိန် ခေါ် နေ တော့ ကျွန်တော် တော် တော် အိပ် ရေး ပျက် နေ ပါ တယ်။
Viber သုံး နိုင် တဲ့ ဖုန်း တွေ က တော့ Iphone, Android, Blackberry , Windows phone တွေ မှာ အသုံး ပြု နိုင် ပါ တယ်။ ( ကျွန်တော် အိမ် က တော့ IPhone သုံး ပါ တယ်။ )
Whatsapp သုံး နိုင် တဲ့ ဖုန်းတွေ က တော့ Iphone, Android, Blackberry , နဲ့ Nokia Smart ဖုန်းတွေ ဖြစ် ပါ တယ်။
အခုပြော တဲ့ Apps ၂ မျုိူး လုံး ကို သုံး ပြီး အခ မဲ့ ဖုန်း ပြော နိုင် သလို ၊ အခမဲ့ Text ပို့ ခြင်း ၊ အခမဲ့ ဓါတ် ပုံ နဲ့ ဖိုင် များ ကို အလျှင် အမြန် ပို့ နိင် ပါ တယ်။
ဓါတ်ပုံ တွေ ပို့ ရင် Whatsapps သုံး ရင် အ ရမ်း ကို မြန် ပါ တယ်၊ သုံး ကြည့် ပါ။
အခု ပြော တဲ့ apps တွေ နဲ့ တကမ္ဘာ လုံး မှာ ရှိ တဲ့ ၊ နိုင် ငံ ခြား တိုင်းပြည် အား လုံးက မိမိ ဆွေ မျိုး သားချင်းတွေ ကို အချိန် မရွေး နေ ရာ မ ရွေး အခ မဲ့ ခေါ်ဆို နိုင် တာ မို့ အခု ဆို ရင် ကမ္ဘာ ကြီး က ကျဉ်းကျဉ်း လေး ပါ လို့ ပြော နိုင် ပါ တယ်။
ဒီ အပြင် နိုင်ငံ ရပ် ခြား က လူ တွေ ရော မြန်မာ ပြည် က လူ တွေ ရော ဖုန်း ဘိုး တော် တော် သက် သာ သွား ပါ ပြီ။
ရန်ကုန် က internet ဖုန်း သုံး သူ များ က တော့ အခကြေး ငွေ သက် သာ အောင် လို့ internet ကို အမြဲ online လုပ် မထား ပဲ ၊ မိမိ နိုင် ငံ ခြား ကို ခေါ် ချင် မှာ သာ online ၀င် တာ မို့ နိုင်ငံ ခြား မှ ခေါ် သူ များ က မိမိ အိမ် နဲ့ ဖုန်း အခ မဲ့ ပြော ချင် ရင် ရန်ကုန် ကို ရိုးရိုး ဖုန်း က နေ ဖုန်း အရင် ခေါ် ပြီး internet ဖွင့် ခိုင်း ပြီး viber သို့ Whatsapp က နေ ပြန်ခေါ် ခိုင်း ပါ တယ်။
ကဲ စာ ဖတ် သူ လည်း မိမိ ဆွေ မျုိုး များ ၊ ချစ် သူ များ နဲ့ အခမဲ့ ဖုန်း ပြော နိုင် ဖို့ လို အပ် တဲ့ Apps တွေ ဒေါင်း လုပ် လုပ် ပါ လား။
အား လုံး အဆင် ပြေ ကြ ပါ စေ။
နှစ်သစ် မင်္ဂလာဆုတောင်း နဲ့ မိမိ အလုပ်
အ မေ့ လက် စွပ် လေး
စင်္ကာပူ နိုင်ငံ ဆိုတာ
Posted by aungnyc at 2:26 PM
khin oo may May 13, 2012 12:47 AM
စံပယ်ချို May 13, 2012 7:56 AM
camomile May 14, 2012 3:22 PM
Posted by Nay Zawaung at 3:10 AM
အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ဝေသော Weekly Eleven Ne...
မူးယစ် နယ်စားနော်ခမ်း က သတ်ဖြတ်ခဲ့မိသည့် တရုပ်လူမျ...
ဂျိမ်း(စ)ဘွန်း မင်းသား ရော်ဂျာမိုး ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...
ဆားရောဂါကဲ့သို့ ပဟေဠိဆန်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုး အသစ်တမျ...
ကင်တက်ကီပြည်နယ်မှာ ကရင် တကျပ် မြန်မာကွန်မြူနတီ တပဲ...
တရုပ်နိုင်ငံ၏ အင်တာနက်ထိမ်းချုပ် ကန့်သတ်မှုသည် မြန်...
မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး နှင့် အလုပ်မဖြစ်သော အမေရိကန် မူ...
အိမ် မိသားစုဓါတ်ပုံ မြန်မာမော်ဒယ်များ ...
Acer မှ Iconia Tou...
ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး (ဗိုလ်ချူပ်) နှစ်ဦး၏ နိုင်ငံခြားြေ...
သမ္မတကြီး၏ ဆင်းရဲသား ပပျောက်ရေးကို ဆန့်ကျင်နေသော မြ...
တန်ဖိုးမြင့်တက်လာသည့် ပြင်ဦးလွင် ကျူးကျော်ရပ်ကွက်...
... တရားမျှတမူမရှိရင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာမရှိနိင်ဘ...
နယူးယောက် ၏ ည နေ ဆည်းဆာ ချိန်
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်သို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိက...
အာရှကျားနိုင်ငံများကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေ...
ဗီယက်နမ် ဘဏ်လုပ်ငန်း ရှင် ခရိုနီ ဖမ်းဆီးခံရ
ကလင်တန် : စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ မှု ရုပ်သိမ်း ပေးအုံး...
စတိဗ် ဂျော့ဘ် မရှိ တော့တဲ့ ကမ္ဘာ (အပိုင်း ၁)
apple ကွန်ပျူတာ ကုမ္ပဏီ တီဗွီ ပါ ထုတ်တော့မည်
ယာဟူး တည်ထောင်သူ ဂျယ်ရီ ယန်း ရာထူး က နှုတ်ထွက်
Google မြေပုံ အရာရှိချုပ် ကို Yahoo က CEO အဖြစ်ခန်...
One Body, One Lens….! (ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးမှု ဆိုင်ရာ)...
တစ်စက္ကန့် လျှင် အမြန်နှုန်း 1 GB ရှိသည့် အင်တာနက် ၀...
အသံထက် ခြောက်ဆ မြန်သည့် လေယာဉ် ကို စမ်းသပ်မှု မအောင...
၂၀၁၃ တွင် အင်္ဂါ ဂြိုလ် လေ့လာရေး အစီအစဉ် စတင် မည် ဟု...
တိုက်ချင်း ပစ် အပါအ၀င် မည်သည့် ဒုံးလက် နက် မဆို ဖမ...
လ ပေါ် ပထမဦးဆုံး ခြေချ နိုင်ခဲံ့ သည့် အကာသ သူ ရဲေ...
မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေ၀သ နောက်ဆုံးသတင်းများ ၀က်ဘ်ဆို...
မူရင်းစာမျက်နှာမြန်မာနိုင်ငံ မြို့ များ၏မိုးေ...